ထိပ်တန်း Adsense ခေါင်းစဉ်များ - Ajax, Flash, WordPress နှင့် Firefox | Martech Zone
ထိပ်တန်း Adsense ခေါင်းစဉ်များ - Ajax, Flash, WordPress နှင့် Firefox
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 27, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်ပေါင်းစည်းခဲ့သည် Google Analytics နှင့် Adsense (သိကောင်းစရာ # ၄) ။ ငါရလဒ်များကိုကြည့်ရှုစိတ်ဝင်စားတယ်။ Google Analytics မှာ Reverse Goal Path ရှိတယ်။ အဲဒီမှာသင်ကြော်ငြာကိုမနှိပ်ခင် visitors ည့်သည်တွေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ဤအချက်အလက်နှင့်အတူလက်နက်ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်နှစ်ခုယူနိုင်:
အကယ်၍ ဤအကြောင်းအရာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ရေးသားပါကကျွန်ုပ်ငွေပိုမိုရရှိနိုင်သည်။
ဤဒေသများရှိအကြောင်းအရာများသည် ၀ ယ်လိုအားအလွန်များပြားသောကြောင့်ရှေးရှေးကကြော်ငြာများကိုရယူရန်ဆန္ဒရှိရန်ဖြစ်သည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှသာကျွန်ုပ်၏ခါးပတ်အောက်၌ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများအတွက်နောက်ထပ်ကြော်ငြာ ၀ င်ငွေရရန်အတွက်သာပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်…လူတွေကငါ့ဘလော့ဂ်ကိုရှာနေကြတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ရှာနေတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအတွက်သူတို့လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုမတွေ့တဲ့အခါကြော်ငြာလင့်ခ်တွေကနေတဆင့်ထွက်ခွာကြပုံရတယ်။ ဤတွင် Reverse Goal Path ရှိ stats များကိုကြည့်ရှု့သည်။
သူတို့အားခေါင်းစဉ်? Ajax, Flash, WordPress နှင့် Firefox။ WordPress သည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ရှိသောအခြားနေရာများထက် WordPress tagged အကြောင်းအရာများအပေါ်ပိုမိုထိရောက်သော 'hot' ခေါင်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် WordPress Sidebar Widget ကိုယခုအချိန်၌လုပ်ဆောင်နေပြီး၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုနောက်ထပ်စာဖတ်သူများအားပြသရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
Ajax, Flash, Firefox …ဒီနေရာတွေငါဘယ်ကိုသွားချင်လဲကြည့်ရတော့မယ်။ ငါ Ajax ကိုအရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Flash အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိဘူး (ငါ့သူငယ်ချင်းဘီလ်မှာအများကြီးပိုများတယ်) တကယ်တော့ Firefox ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ဒါက add-on နည်းပညာပါ Firebug! မီးဘေးသည် အ မည်သည့် web developer မဆိုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် ၀ ယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်ထိုအကြောင်းအရာများအကြောင်းကိုရေးပါ၊ Analytics မှအေးမြပါ!
နိုဝင်ဘာလ 13 ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ 6:48 နာရီ
ငါ့မှာ flash ဝဘ်ဆိုဒ်ရှိတယ်။
flash မှာ google adsense ပြတဲ့ script ကို ရှာနေပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ 17 ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ 2:23 နာရီ